Zvishandiso zvemashoko edu zvepachena zvakasiyana nebasa reshanduri. Zviri mukati mawebsite zvakashandurwa. Asi URL dzewebsite dziri muChirungu izvo zvisingashanduriki mune dzimwe mimwe mitauro. Mutauro wedu unogona kupa nyika yose sarudzo yeiyo.
URL dzemawebsite dziri muChirungu.
Saka, vanhu vasiri English, vagari vomumaruwa uye vemo vanogona kuzarura mawebhusayithi. Mutauro wedu shanduro inonyanyogadzirwa kwavari. 1. Vashandisi vemitauro yegungwa vachawana webpage nekubatsirwa chero ani kamwe chete 2. Mushure mezvo vanogona kuzarura mawebhusayithi nechombo chedu, nemaoko avo pachavo.
3. Vachapinza pakero bar ppooii Ctrl + Enter site ichazaruka kana ooiiuu.com nezvimwe (zvipi zvese zvitatu, kurudyi kuruboshwe, kaviri, izvo zviri pamwe chete pa keyboard.)
4. Hurumende uye vashandi vepawebsite vanofanira kunyora code yedu mune mawebsite
Mitauro yedu midziyo inoshanda sekutevera mawebsite.
1. Kopa uye unyore kodeti mu --body-- tag mune rako rega webhusaiti uye udzidze.
2. Vhura webhusaiti yako mu browser yako kwenguva imwe mushure mokutora code.
3. Zvino faira pakero bar ppooii.com kana (ooiiuu uye Ctrl + Enter). Ona chinyamu keyboard
Shanduro yedu mutauro inoshanda sekutevera vanhu.
1. Zvino faira pakero bar ppooii.com kana (ooiiuu uye Ctrl + Enter). Ona chinyamu keyboard 2. Chero zvitatu zvitatu, kurudyi kuruboshwe, kaviri, izvo zviri pamwe chete pa keyboard